အောက်ဖော်ပြပါ ဗဟုသုတများကို ဖတ်ရှုပြီးပါက ကြက်တစ်ပင်လုံးတွင် ရတနာများ ရှိနေသည်ကို သင်သိပါလိမ့်မည်။
ကြက်များ၏ ဇီဝလက္ခဏာများ 1. ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်သည် 40.9 ဒီဂရီနှင့် 41.9 ဒီဂရီကြားရှိပြီး ပျမ်းမျှကိုယ်အပူချိန်မှာ 41.5 ဒီဂရီဖြစ်သည်။ ကြက်ငယ်များ မွေးမြူသည့်အခါတွင် ကြက်အိမ်၏ အပူချိန်သည် ယေဘုယျအားဖြင့် ၃၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် မြင့်မားသည်။ ၂။ နှလုံးခုန်၊ ၁၆၀ မှ ၁၇၀ ထိ...
မနှစ်တုန်းကတော့ အဝါရောင်တောက်တောက်နဲ့ ပါးစပ်သေးသေးလေးနဲ့ မွေးမြူခဲ့တယ်။ အသက်ဝင်ပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့အပြင် အရမ်းမိုက်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် တခြားသူတွေရဲ့နောက်ကို အနီးကပ်လိုက်ရတာကို နှစ်သက်ပေမယ့် ရုတ်တရက် ရပ်လိုက်ရင်တော့ တုံ့ပြန်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ လူကို ရယ်မောစေသော ကျွမ်းပစ်ချော်မည်၊ တစ်ခါတလေတော့ ယူသွားလိုက်မယ်...
အနှစ်ချုပ် - အထွက်နှုန်းမြင့်မားပြီး သင့်ကြက်များကို ကျန်းမာစွာ ကြီးထွားစေလိုပါက ကြက်လှောင်အိမ်ရွေးချယ်ရာတွင်လည်း အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ငါတို့ကြက်တွေအတွက် သက်တောင့်သက်သာရှိတဲ့ ကြက်လှောင်အိမ်ကိုလည်း လုပ်လို့ရတယ်၊ ဒီတော့ ကြက်လှောင်အိမ် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ဘယ်လိုနည်းလမ်းလေးတွေလဲ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်...
ကြက်လှောင်အိမ်သည် လေ၀င်လေထွက်ကောင်းကာ နေရောင်လုံလောက်စွာရနိုင်သောနေရာ၊ သွားလာရေးအဆင်ပြေကာ ရေနုတ်မြောင်းနှင့် ဆည်မြောင်းများ အဆင်ပြေသောနေရာတွင် ဆောက်လုပ်နိုင်ပါသည်။ ကြက်လှောင်အိမ်တွင် အစာကျင်းများ၊ ရေလှောင်ကန်များ၊ အပူချိန်ထိန်းကိရိယာများ တပ်ဆင်ထားသင့်သည်။ ကြက်အစာကျွေးခြင်း- အပူချိန်သည်...
ပေါက်ပြီးခါစ ကလေးတွေကို ဘယ်လိုကျွေးရမလဲ နဲ့ သားဖောက်တဲ့စက်က သားဖောက်ဖို့ ဘယ်နှစ်ရက်လိုလဲ
1.Temperature- အပူချိန် 34-37°C တွင်ထားပါ၊ ကြက်၏အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကို ထိခိုက်မှုမဖြစ်စေရန် အပူချိန်အတက်အကျသည် အလွန်ကြီးမားမနေသင့်ပါ။ 2. စိုထိုင်းဆ- နှိုင်းရစိုထိုင်းဆသည် ယေဘုယျအားဖြင့် 55-65% ဖြစ်သည်။ မိုးရာသီမှာ စိုစွတ်နေတဲ့ အမှိုက်တွေကို အချိန်မီ သန့်ရှင်းရေးလုပ်သင့်ပါတယ်။ ၃။ အစာကျွေးခြင်း...
18 ရက်ကြာ ကြက်သားပေါက်တဲ့အခါ ဘာကို သတိထားရမလဲ သိလား။
ကြက်သားကို ၁၈ ရက်ကြာ အကောင်ပေါက်တဲ့အခါ သတိထားစရာတွေ ရှိပါသလား။ အားလုံးသိကြလား? ဒီနေ့တော့ အတွေ့အကြုံလေး မျှဝေပေးပါဦးနော်။ နည်းလမ်း/အဆင့် သင်ကိုယ်တိုင် သားပေါက်ချင်ရင်တော့ ကြက်သားဖောက်လို့ခေါ်တဲ့ အထူးစက်တွေ လိုအပ်ပြီး ပေါက်ဖွားတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်လည်း လိုအပ်ပါတယ်...
1. incubator ၏တည်နေရာကိုရွေးချယ်ပါ။ သင့်မီးဖွားခန်းကို အပူချိန်အဆက်မပြတ်ရှိနေစေရန်၊ အပူချိန်အတက်အကျများကို တတ်နိုင်သမျှ သေးငယ်သောနေရာတွင် ထားပါ။ နေရောင်နှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့သော ပြတင်းပေါက်များအနီးတွင် မထားပါနှင့်။ နေရောင်ခြည်သည် သားအိမ်ပေါက်ကို အပူပေးပြီး ဖွံ့ဖြိုးဆဲ သန္ဓေသားလောင်းကို သေစေနိုင်သည်။ ချိတ်ဆက်...
1. မျိုးဥများပေါက်ဖွားခြင်း သို့မဟုတ် မျိုးဥများကို ချိန်တွယ်ပါ။ အားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီးနောက်၊ ဥများကိုချနိုင်ပြီး ပေါက်ဖွားနိုင်ပါပြီ။ မျိုးပွားဥ၏ အပူချိန်သည် သိုလှောင်မှုအတွင်း ယေဘုယျအားဖြင့် နိမ့်ပါသည်။ ပြီးနောက် စက်အတွင်း အပူချိန်ကို အမြန်ပြန်ထိန်းနိုင်ရန်...
အနှစ်ချုပ် - အထွက်နှုန်းမြင့်မားပြီး သင့်ကြက်များ ကျန်းမာစွာ ကြီးပြင်းလိုပါက ကြက်လှောင်အိမ်ရွေးချယ်ခြင်းသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ငါတို့ကြက်တွေအတွက် သက်တောင့်သက်သာရှိတဲ့ ကြက်လှောင်အိမ်ကိုလည်း လုပ်လို့ရတယ်၊ ဒီတော့ ကြက်လှောင်အိမ် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ မျှဝေလိုက်ကြရအောင်...
ကြက်လှောင်အိမ်တွင် မည်သို့သော အနုတ်လက္ခဏာဖိအားပန်ကာကို အသုံးပြုမည်နည်း။
1. လေဝင်လေထွက်နှင့် လေဝင်လေထွက်အတွက် အနုတ်လက္ခဏာဆောင်သော ပန်ကာကို အသုံးပြုသည်- အလုပ်ရုံပြတင်းပေါက်အပြင်ဘက်မှာ တပ်ဆင်ထားပြီး၊ ယေဘူယျအားဖြင့် အောက်ပေါက်ကို ရွေးချယ်ပါ၊ ထူးခြားသောဓာတ်ငွေ့ကို ထုတ်ယူရန်အတွက် လေကို စွန့်ထုတ်ပါ။ ယေဘူယျအားဖြင့် negative pressure fan ကို အမှန်တကယ်အသုံးပြုသည်...